မိန်းကလေး ၀ တ်ထားသည့်အကျီ FH-17
စတိုင်နံပါတ် .: FH-17 အရောင်: အနက်ရောင်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: Shell: 100% polyester ရက်ထည်; အရှည်: 210T taffeta; ဖြည့်စွက်ခြင်း - လက်ဖြင့်ပိုးထည်ကဲ့သို့သောဆက်စပ်ပစ္စည်းဆက်စပ်ပစ္စည်း: ပိုက်ကြိုး၊ ခလုတ်၊ ပလတ်စတစ်ဇစ်သွင်ပြင်လက္ခဏာ: ခလုတ်ဖြတ်နှင့်ချုပ်ထားသည်
မိန်းကလေး ၀ တ်စားဆင်ယင် XGR-155
စတိုင်နံပါတ် .: XGR-155 အရောင်: အဖြူရောင်ဖြန့်ပြီးအရွယ်အစား Range: 4-12A အထည်: အခွံ: ၁၀၀% ဝါဂွမ်းကြွေထည်ထည်; နံရံ - ၁၀၀% ဝါဂွမ်းထည် ၉၀ × ၈၈ ဆက်စပ်ပစ္စည်း - ဇာ၊ မမြင်ရသောဇစ်မှတ်ချက်မှတ်တိုင် - tassels ဖြင့်ပန်းထိုးခြင်း၊ ချည်ကြိုးဖြင့်လက်ဖြင့်ကြိုး၊ အောက်ခြေကြိုးကြိုး
မိန်းကလေး ၀ တ်စားဆင်ယင် WW-15
စတိုင်နံပါတ် .: WW-15
အရွယ်အစား Range: 4-12A
အထည်: Shell: 100% polyester ဇာ; နံရံ - ၁၀၀% ဝါဂွမ်းထည် 90x88
ဆက်စပ်ပစ္စည်း: ငွေအခြမ်းနှင့်အတူယက်တိပ်, မမြင်ရသောဇစ်
မှတ်စုများ - ရှေ့မှောက်တွင်ငွေနှစ်ဖက်ပါသည့်ယက်ထားသောတိပ်လေး
မိန်းကလေး ၀ တ်စားဆင်ယင် WP-3095
စတိုင်နံပါတ် .: WP-3095 အရောင်: ဂျင်းဘောင်းဘီအပြာရောင်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: ၇၀% ဝါဂွမ်း ၃၀% jutecell တုပသောပိုးဂျင်းထည်ဆက်စပ်ပစ္စည်း: ညှိနိုင်သည့်ထိတွေ့နိုင်သောမှတ်သားချက်မှတ်ချက်။
မိန်းကလေး ၀ တ်စားဆင်ယင် WP-3006
စတိုင်နံပါတ် .: WP-3006 အရောင်: အပြာရောင် / အဖြူရောင်အစင်းများအရွယ်အစား: 2-10A အထည်: ၁၀၀% ဝါဂွမ်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောယက်ထည်ဆက်စပ်ပစ္စည်း: သစ်သားခလုတ်၊ ချိန်ညှိနိုင်သောထိတွေ့နိုင်သောမှတ်သားချက်မှတ်ချက် - အောက်ပိုင်းထည်ပေါ်ရှိဖြတ်နှင့်ချုပ်ထားသောပြား ၃ အုပ်
မိန်းကလေး ၀ တ်စားဆင်ယင် WP-3004
စတိုင်နံပါတ် .: WP-3004 အရောင်: အပြာရောင် / အဖြူရောင်အစက်အပြောက်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: ၁၀၀% ဝါဂွမ်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောရက်လုပ်သည့်အထည်အပိုပစ္စည်း: အလှဆင်သောပန်းများ၊ ပုလဲ၊ ပလတ်စတစ်ခလုတ်မှတ်ချက်များ - ပုလဲများဖြင့်ရှေ့ပန်းထိုးခြင်း၊ ထည်လေး
မိန်းကလေး ၀ တ်စုံ LY-609
Style No .: LY-609 အရောင်: ပန်းရောင် / မီးခိုးရောင်အရွယ်အစား: ၁-၅ အေအထည်: ၉၅% ဝါဂွမ်း ၅% spandex တစ်ခုတည်းဂျာစီ၊ 160 gsm; အောက်ပိုင်းအခွံ - sequins ပါ ၀ င်သော 100% polyester ကွက်၊ အနိမ့်နံရံ - ၁၀၀% ဝါဂွမ်းထည် 90 × 88 ဆက်စပ်ပစ္စည်း - ဆက်တင်မှတ်ချက် - နေရာချထားသောပုံနှိပ်ခြင်း၊
အရောင်: အဖြူ / ပန်းရောင်
အထည်: Shell: 100% polyester ယက်ထည်; အရှည်: 210T taffeta
ဆက်စပ်ပစ္စည်း: Nylon zipper, နှစ်ဖက်စလုံးကိုငွေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောတိပ်ခွေ
မှတ်စုများ - ကိုယ်ထည်ကိုယ်ထည်အပေါ်ပုံနှိပ်ခြင်း၊ raglan အင်္ကျီလက်နှစ်ဖက်စလုံးကိုငွေဖြင့်ယက်ထားသောတိပ်ခွေ၊ လည်ပင်း၊ ဖိနပ်နှင့်အောက်ဘက်ပြားချည်ထားသည့်နံရိုး
စတိုင်နံပါတ် .: WW-3 အရောင်: Navy / Pink / White အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: Shell: 100% polyester ထွန်းလင်းယက်ထည်; နံရံ - 210T taffeta ဆက်စပ်ပစ္စည်း: နိုင်လွန်ဇစ်၊ elastic မှတ်ချက်။ ရှေ့နှင့်ကိုယ်ခန္တာကိုယ်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်အသွေးရှိသည့်ပြား။
Style No .: WW-1 အရောင်: ပန်းရောင် / အဖြူရောင်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: Shell: 100% polyester ရက်ထည်; ကြိုး: 210T taffeta ဆက်စပ်ပစ္စည်း: နိုင်လွန်ဇစ်၊ ပိုက်ကြိုး၊ elastic မှတ်ချက်။ ။ အရောင် ၃ ခုပါသည့် Raglan လက်
မိန်းကလေး၏သားမွေးအ ၀ တ်အစား TU-01
Style No .: TU-01 အရောင်: Grey Size Range: 1-5A အထည်: Shell: 100% polyester ယုန်သားမွေး; အရှည်: 210T taffeta; ဖြည့်စွက်: Polyester qulited padding 120g ဆက်စပ်ပစ္စည်း: ပလတ်စတစ်ဇစ်၊ ပုလဲ၊ elastic Feature: ပါးပျဉ်းပေါ်တွင်နားပတ်ပတ်လည်စည်ထည်နားကပ်ထားသောပန်ဒါမျက်နှာဖုံး။ မှတ်စုများ - ရှေ့အိတ်ကပ်ပေါ်ပုလဲ
မိန်းကလေးအဝတ်အစား XN-8062 သတ်မှတ်ပေးသည်
စတိုင်နံပါတ်: XN-8062 အရောင်: ရေတပ်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: ၁၀၀% polyester ချည်ထည်သည်နှစ်ဖက်စလုံးကိုနှစ်ဖက်စလုံးကိုပျော့ပျောင်းသောလက်ဖြင့်ကိုင်တွယ်သည်။
<< <နောက်သို့ 234567 နောက်> >> စာမျက်နှာ ၅/၇